Soeda: Mitsidika An’i Rinkeby, Ambany Tanàna Be Mpiavy Ao Stockholm · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Mohammed Alamer
Voadika ny 16 Avrily 2012 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Español, Ελληνικά, polski, Svenska, Italiano, عربي
Malaza noho ny fahamaroan'ny mpifindra monina ao aminy ny fokontanin'i Rinkeby ao Stockholm, Soeda. Mitantara ny fitsidihany io faritra io izay mba te-hijerijery izany faritra izany.
Monina any Stockholm ny mpanao gazety sy bilaogera Yemenita Afrah Nasser. Nanoratra momba ny nitsidihany voalohany an'i Rinkeby izy tao amin'ny hafatra bilaogy tamin'ny 6 Avrily 2012.
Niteny i Afrah:
Naheno foana aho eto Stockholm fa misy fokontany antsoina hoe Rinkeby feno mpifindra monina hany ka zara raha ahitana Soedoà ao. Nanapa-kevitra ny ho any aho noho izany omaly. Te-hahita izany faritra kely tsy soedoà izany aho.
Famantaran-dalana ao Rinkeby. Saripika Afrah Nasser (nahazoana alalana)
Voamarik'i Afrah rehefa tonga teo amin'ny garan'ny metro ao Binkeby fa ratsy tarehy noho ny ankamaroan'ny garan'ny metro hafa ao Stockholm tahaka an'i T-Centralen izy. Nataony fampitahana ny sarin'ireo gara roa ireo:
Ny tsapako voalohany raha vao tonga tao amin'ity gara ambanin'ny tany ity aho : “Oh la la, toa mampatahotra ity metro ity izany! nahoana no tsy misy sary mihitsy? tahaka ny any Karlaplan (toerana fianjaika/fiakanjoan'ny Soedoà) ! Tsy misy doka, na sary mahafatifaty tahaka ny fahita any amin'ny rindrin'ny metro rehetra manerana ny tanàna.
Gara T-Centralen. Saripika Afrah Nasser (nahazoana alalana)
Gara Rinkeby. Saripika Afrah Nasser (nahazoana alalana)
Maro amin'ny olona monina ao Rinkeby no tsy mahita asa tsara ivelan'ny faritra onenany noho ny tsy fahaizany ny kely indrindra ny teny Soedoà. Araka ny nolazain'i Tricia Wang, bilaogera Amerikana sy mpandalina ny kolontsain'ny fiaraha-monina nitsidika an'i Rinkeby tamin'ny 2008, fa manahy ny tsy hananan'ny zanany ho avy mamiratra any ity ramatoa nalainy sary ity noho ny tsy fahaizana teny anglisy sy soedoà ifampiresahana any an-tsekoly.
Mpivaro-mofo ao Rinkeby. Saripika Tricia Wang hita flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Tsenan'anana ao Rinkeby Saripika Tricia Wang hita flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Niteny i Afrah nandritra ny fiafaran'ny famangiany:
Nataoko veloma niaraka tamin'ny fahatsapana fa misy fanavakavahana ao Stockholm i Rinkeby. Misy fanavakavahana toy izany ihany koa ao Sana'a, tanàna nihaviako. Monina eo ankilany ny mpanankarena ary eo andaniny ny mahantra. Ny Yemenita miara-monina etsy ankilany, ny mpiavy miara-monina etsy andaniny. Fantatro ankehitriny izany atao hoe fanavakavahana ara-tsosialy. Ao Sana'a misy fokontany antsoina hoe Safia maro Somaliana monina ao. Antsoinay hoe Maqadishu izy io. Manao fanamby aho fa Rinkeby no Safiàn'i Stockholm. Tsy zava-baovao amiko izany fa nahaliana ny mahalala ny lafy hafan'i Stockholm.
Afisy ao Rinkeby miresaka fandefasam-bola iraisampirenena mankany Afrika. Saripika Tricia Wang hita flickr (CC BY-NC-SA 2.0)